Questions प्रश्नहरू तपाइँको वेबसाइट आगन्तुकलाई सोध्नुहोस् Martech Zone
सोमबार, सेप्टेम्बर 1, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अविनाश कौशिक एक हो Google विश्लेषण Evangelist तपाईले आफ्नो ब्लग पाउनुहुनेछ, Okam को रेजर, एक उत्कृष्ट वेब एनालिटिक्स हो स्रोत भिडियो इम्बेड गर्न सकिदैन, तर तपाईं तलको छविमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ:
अविनाश शानदार अन्तरदृष्टिमा छुन्छन्, विश्लेषण गर्नु समावेश सहित तपाईको वेबसाइटमा के छैन त्यो हुनुपर्दैन। अविनाश उल्लेख गर्दछन् iperधारणा, कम्पनीलाई सहायता गर्ने कम्पनीले ग्राहक सन्तुष्टि बुझ्दछ। तिनीहरू केवल questions प्रश्नहरू सोध्छन्:
तपाईको वेबसाईटमा को आउँदैछ?
तिनीहरू त्यहाँ किन छन्?
तपाईले के सुधार गर्नु पर्छ?
यी चार प्रश्नहरूले तपाईंको साइटमा महत्वपूर्ण सुधार गर्न सक्छन् र यो ड्राइभको व्यापार परिणामहरू। के तपाईंलाई यी प्रश्नहरूको उत्तर थाहा छ? यदि होईन भने, तपाईं कसरी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ र आगामी परिवर्तनहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ?
वेब विश्लेषकको सर्वश्रेष्ठ सुविधा?
यस स्लाइडले मेरो ध्यान अरू भन्दा बढि ध्यान पुर्‍यायो किनकि मेरो उत्पादन व्यवस्थापकको रूपमा अनुभवको साथ उत्पाद सुविधाहरूको लागि आन्तरिक र बाह्य अनुरोधहरू.
गलत हुन सिक्नुहोस्। छिटो
अर्को शब्दमा, तपाइँको साइट (वा उत्पादन) मा के राख्नु पर्छ भनेर अनुमान नगर्नुहोस् र यसलाई समितिमा जान नदिनुहोस्। उत्पादनमा राख्नुहोस् र परिणामहरू हेर्नुहोस्! तपाईंको साइट वा उत्पादन कसरी विकसित हुन्छ भन्ने बारे परिणामहरू मार्गनिर्देशन हुन दिनुहोस्।
भिडियो हेर्नाले विश्लेषणको शक्तिमा केहि अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ! निश्चित रूपमा समय लिनुहोस् र भिडियो अवलोकन गर्नुहोला, यो साच्चै तपाईले सोच्नु पर्छ कि तपाईसँग भएको कुनै प्याकेजलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको वेब साइटबाट राम्रो प्रदर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
ओकेमको रेजर के हो?
यदि तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि ओकेमको रेजर के हो र यसले एनालिटिक्ससँग के गर्न सक्दछ:
ओकामको रेजर (कहिलेकाँही ओखमको रेजरको हिज्जे) एक सिद्धान्त हो जुन १ 14 औं शताब्दीका अंग्रेजी तर्कविद् र फ्रान्सिस्कन फ्रिअर, ओखमको विलियम हो। सिद्धान्तले भन्छ कि कुनै पनि घटनाको स्पष्टीकरणले सम्भव भएसम्म केही अनुमानहरू बनाउनु पर्छ, जसले व्याख्यात्मक परिकल्पना वा सिद्धान्तको अवलोकन योग्य भविष्यवाणीहरूमा कुनै फरक पार्दैन।
ओकामको रेजर, विकिपेडिया
माच जोएल मा टोपी टिप अलगिको छ पिक्सेल खोजको लागि।
टैग: पुस्तक हस्ताक्षरbwe12कम्प्युटरकम्प्यूटर भिजन सिंड्रोमडमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि।डेस्कघटनाहरूfanourcingमोबाइल एड-टु-कार्ट दरहरूमोबाइल रूपान्तरण दरआउटलेटपुरस्कारपर्दाबेन्चमार्क खोज्नुहोस्खोज सम्मेलनहरूघटनाहरू खोज्नुहोस्सामाजिक बुकमार्किंगसामाजिक मिडिया सम्मेलनहरूसामाजिक मिडिया घटनाहरूबिदा लिउजम्मा गर्नु
ब्रायनको थ्रेड गरिएका टिप्पणीहरू: अनुकूलित